Ny tantaran'ny analytics an-tranonkala sy ara-tsosialy | Martech Zone
Talata, Jona 21, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Tianay ny infografika… ary raha tsy tsikaritrareo dia manana sokajy iray fotsiny izahay ho an'ny an-tsary (miaraka amin'ny azy manokana fahana). Tianay tokoa ny infografika ka nanomboka nanangana ny anay manokana izahay ary koa ny sasany ho an'ireo mpiara-miasa sy mpanjifanay. Ity iray ity dia novolavolaina ho an'ny mpanjifanay, Webtrends, ary manome tantaran'ny media sosialy Analytics ary analytics amin'ny tranonkala.
Raha te hizara an'ity Infographic ity amin'ny tranokalanao ianao dia mahazo alalana feno aminao raha toa ka manome rohy miverina amin'ity lahatsoratra ity ianao sy Webtrends. Ity infographic ity dia novolavolain'ny masoivohontsika, DK New Media.
Jun 22, 2011 ao amin'ny 12: 22 PM
Jun 22, 2011 ao amin'ny 3: 04 PM
Fisamborana lehibe, Marco! Hetsika Netscape ho avy 🙂
Jun 24, 2011 ao amin'ny 9: 51 PM
Azonao atao ve ny mitanisa ireo loharano niavinao? Tokony ho fanao mahazatra izany rehefa mamorona infographic.
25 Jun 2011 amin'ny 2:11 AM
Izany dia mahazatra amin'ny infografika izay manome antontan'isa. Na izany aza, tsy angon-drakitra voaangona na voaisa ity izay mila fanamarinana. Ny lisitry ny loharanom-pahalalana dia mety ho lava noho ny Infographic mihitsy. Raha mamaky ny singa tsirairay ianao, dia ho hitanao fa manondro ny loharano ilaina izahay (Wikipedia, Gartner, Anaran'ny orinasa, sns.). Zahao ny tantaran'ny tranonkalan'ny orinasa ihany koa.
1 Aogositra 2011 amin'ny 8:53 PM
Fanitsiana kely fotsiny FYI, XiTi (Internet AT ankehitriny) nanomboka tamin'ny 1997 fa tsy 2004
1 Aogositra 2011 amin'ny 9:03 PM
Ny fifantohana dia tsy ny fandefasana ny orinasa fa ny sehatry ny analytics izay navoaka.